शास्त्र भन्छ गर्भवती महिलाले कोठामा यी चिज राख्दा जन्मिन्छ वुद्धिमान र तेज दिमागको बच्चा - Babal Khabar
ग’र्भवती महिलाले स्वास्थ्यको निकै ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ। जसमध्ये वास्तुमा बताइएका केही बस्नु उनीहरुका लागि बरदान बन्न सक्छन्।
वास्तुका अनुसार यदी कुनै महिलाले कुनै खास चीज कोठामा राख्दा महिला र बच्चा दुबैको स्वास्थ्यमा राम्रो असर पर्ने र बच्चा गुणवान हुने गर्दछन्।
मयूरको प्वाख-मयूरको प्वाख कृष्णसँग सम्बन्धीत हुने गर्दछ। त्यसैले यसलाई घरको मन्दिर वा ग’र्भवती महिलाले कोठामा राख्दा आमा र बच्चाका लागि निकै राम्रो मानिन्छ।
पहेलो चामल-पहेलो चामलले शुभ शंकेत बताउने गर्दछ। त्यसैले गर्भवती महिलाले कोठामा पहेलो चामल राख्दा आमा र बच्चामा कुनै किसिमको नकारात्मक उर्जा नपर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ।
भगवान कृष्ण र देवी यशोदाको तस्वीर-गर्भवती महिलाले कोठामा भगवान कृष्ण र देवी यशोदाको तस्वीर लगाउनु शुभ मानिन्छ। यसरी लगाएको तस्वीर विहान उठ्ने वित्तिकै देखियो भने सकारात्मक उर्जा प्राप्त हुने धार्मीक विश्वास छ।
गुलाबी रंगको तस्वीर-गुलाबी रंग खुसी र आनन्दको प्रतिक मानिने गरिन्छ। त्यसैले गर्भवती महिलाले आफ्नो कोठामा यस रंगको ठूलो तस्वीर वा शो पिस राख्नु राम्रो मानिन्छ।
हाँसिरहेको बच्चाको तस्वीर-गर्भवती महिलाले कोठामा हाँसिरहेको वा मुस्कुराइ रहेको बच्चाको तस्वीर लगाउनु शुभ मानिन्छ। यसो गर्दा बच्चा शान्त र हंसमुख स्वभावको हुने धार्मीक विश्वास छ। यो पनि पढनुस,
गर्मी मौसममा लामखुट्टेले टोकेर हैरान बनाउँछ । तर हामी मध्ये कतिपय यस्ता छौ जसलाई अन्यको तुलनामा लामखुट्टेले धेरै टोक्छ ।
तर किन त लामखुट्टेमा मानिस र जनावर भएको ठाउँ थाहा पाउने एक विशेष प्रकारको सेन्सर हुन्छ । यसैको मद्दतले यसले शिकारलाई खोज्दछ। यस अलावा अन्यको तुलनामा कसैलाई बढि लामखुट्टेले टोक्छ भने लामखुट्टेलाई के कुराले आकर्षित गर्छ त ? यी हुन् कारणः
मोटो मानिसले धेरै तापक्रम र कार्बनडाइअक्साइड पैदा गर्दछन्। त्यसैले उनीहरुको बडी मास धेरै हुन्छ यसकारण उनीहरुलाई लामखुट्टेले धेरै टोक्छ। लामखुट्टेले शरीरको गन्धमार्फत पनि मानिस भएको ठाउँ थाहा पाउँछ । जति कडा गन्ध हुन्छ लामखुट्टेले टोक्ने सम्भावना त्यति धेरै हुन्छ।
सामान्य महिलाको तुलनामा गर्भवती महिलालाई लामखुट्टेले बढि टोक्दछ। धेरैलाई थाहा नहोला तर हामीलाई टोक्ने लामखुट्टे पोथी मात्र हुन्छ। भाले लामखुट्टे शाकाहारी हुन्छन् र बोट बिरुवाको रस चुसेर बाच्छन् । पोथी लामखुट्टेलाई लार्भा उत्पादन गर्न मानव रगत पोषणको रुपमा प्रयोग हुन्छ । विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा
Prevलामखुट्टेले किन अरुलाई भन्दा बढी तपाईंलाई टोक्छ ? यस्तो छ कारण
nextपत्नीले जन्माएको बच्चा पतिले मेरो हैन भनेपछि विषय अदालत पुग्यो, अदालतको आदेशले दुनियाँ हैरान